पशुपति शर्माको रंगशाला सम्बन्धि नयाँ गित सार्वजनिक (भिडियो हेर्नुहोस)
चर्चित लोकदोहोरी गायक पशुपति शर्माको नयाँ गीत सार्वजनिक भएको छ।
लुट्न सके लुटको विवाद पछि पशुपतिले धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनले निर्माण गरिरहेको ‘गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला’ को बिषयलाई लिएर गीत बनाएका छन्।
‘हजुर हाम्रै पाला, जसरी नि बनाउँने हो क्रिकेट रङ्गशाला’ बोलको गीतलाई पशुपति शर्मा र देवी घर्ति मगरले स्वर दिएका छन्। पशुपति शर्माको शब्द संगीतमा तयार भएको उक्त गीतलाई दिवश हुमागाँई र नविन घर्ति मगरले सम्पादन गरेका हुन् भने शंकर बिसीले निर्देशन गरेका हुन्।
गीतको भिडियोलाई धुर्मुस सुन्तली अफिसियल युट्युव च्यानलबाट सार्वजनिक गरिएको छ। जुन भिडियो तल हेर्नुहोस ।
सफल कसरी बन्ने, यस्ता छन् सफल हुने शुत्र !
हामी अनेक यत्न गर्छौ । अनेक बाटो समात्छौं । तैपनि सफलता पाइरहेका हुँदैनौ । यसको पछाडि अरु कारणले ठूलो अर्थ राख्दैन । बरु, हाम्रो आफ्नै बानी, व्यवहारले हामीलाई सफल हुनबाट अवरोध गरिरहेको हुनसक्छ ।
किनभने सफलताका लागि हामी स्वंम बदलिनुपर्छ । कतिपयसँग यस्ता साझा बानी हुन्छन्, जसले उनीहरुलाई सफलताको उचाईमा पुर्‍याउँछ । के हुन् त ति बानी ?
यसको अर्थ हो, आफ्नो जीवनका लागि स्वंमलाई जिम्मेवार बनाउनु । आफ्नो उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्छ । यसका लागि तपाईले आफ्नो वंशानुगत गुण, परिस्थिती, परिवेशमा निर्भर रहनु पर्दैन र दोष दिन पनि आवश्यक छैन ।
प्रोएक्टिभ व्यक्ति आफ्नो समय, शक्ति र बुद्धि त्यही कुरामा खर्च गर्छन्, जसलाई उसले नियन्त्रण गर्न सक्छ । हामीसँग जतिपनि समस्या, चुनौती र अवसर हुन्छ, त्यसलाई दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ ।